लिम्बु संसार // साहित्य: December 2009
लिम्बु संसार // साहित्य
लिम्बू जाती र ईतिहास
लिम्बुवान त्यसै उत्पति भएको वा कसैले राखिदिएको कुनै जाति वा समुदायको नाम होइन । यो त किरात सभ्यतामा किरातभूमिको राजनैतिक क्रान्तिले जन्माएको नाम हो । आजको लिम्बुवान भूमिलाई लिम्बुवान भन्नुभन्दा पहिले फेदाप भनिन्थ्यो । सिमाङ्गढबाट लुक्थोयोको नेतृत्वमा पूर्व बिजुगखोला आउने सौमर किरात वंशमध्ये भाइफुट्टा (वर्तमान लिम्बु वंशका एक शाखा) वंशीले अरुणखोला तरी फेदाप पहाडका जंगल उजाड गरी बसे । यस वंशका राजालाई भाइफुट्टाहाङ भन्थे । यिनको दरबारमा च्याम्जोलो नामक एक ज्ञानी मन्त्री थिए । यिनै मन्त्रीको सहायताले भाइफुट्टाहाङले फेदाप वरिपरिका गाउँहरु वालुङ, तम्बर, मेवा, मैवा, छथर, पान्थर र चौबीसमाथि आफ्नो अधिकार जमाए । विस्तारै उनले अरुणपश्चिमका किराती गाउँले राजाहरुलाई आफ्नो पकडमा राखेर शासन चलाए । भाइफुट्टाहाङको नौ पुस्तापछि यो वंशमा जिते नामक एक राजा भए । यी राजाका पर्वते नामक एक वीर पुत्र भए । त्यसबेलाका पहाडी खण्डका वीरहरुमा यिनी र्सवश्रेष्ठ थिए । पर्वते राजाका छोरा मलयकेतु राजाका पाँच पुस्तापछि फेदापमा साम्युकहाङ राजा भए । यी राजाले आफ्नो रैयतहरुलाई अत्याचार गर्दा मधेशबाट फिरेका किरातीहरुले विद्रोह गरे । तिब्बतबाट आएका लाशावंशी किरातहरुले पनि जोरतोडले मधेशी किरातहरुलाई मद्दत दिए। साम्युकहाङ विद्रोहमा मारिए । र, फेदापमा भाइफुट्टाहाङ वंशी राजाहरुको अन्त भयो र इशाको ३०० वर्षछि फेदापमा वाजदेव नामक राजा भए । उनले लिबाङमा राजधानी बनाई शासन गरे । यो राजापछि त्यहाँ १२ राजाहरुको क्रम प्रारम्भ भयो ।
यसरी नै इशाको सातौं शताब्दीतिर आइपुग्दा आठ आपुङगी राजाहरुले फेदापलाई विभिन्न आठ प्रान्तमा विभाजन गरी राज्य गरे । ताइश्यान वंशीहरु जो नाम्मावबाट उत्तरपश्चिम दिशा लागी बर्साई आउँथे, तिनीहरुले आफ्नो किपट पातकोई पहाड र चिन्डविन नदीको बीचमा खामति भन्ने जग्गामा बनाए । त्यहाँ तिनीहरुले धेरै पुस्तासम्म राज्य गरी बसे । इशाको छैटौं शताब्दीपछि यही खामति भन्ने जग्गाबाट दश चिनियाँ सरदारहरुले आफ्नो शाखा-सन्तान उर्ठाई पातकोई पहाडतर्फलागी आसाम बर्साईं आए । तर, यो जग्गा अघि आउने वंशद्वारा आवाद भइसकेको हुनाले अझ पश्चिम बढेर काशी (वनारस)को मैदानमा आई बसे । हिन्दूस्थानमा आई बस्ने मंगोली, शक् कुशान, ग्रीक राजाहरु राजनैतिक कारण हिन्दू भई राजपूत वंशमा गाभिएका थिए । राजपूत राजाहरुले हिन्दू मतमा नआउने हुण जातिलाई देशबाट निकालेका थिए । यसो हुँदा तिनीहरुलाई काशी छोड्नु कर लाग्यो । यिनीहरु उत्तरपूर्वका पहाडी खण्डमा बसाईं आए । ती दश सरदारका साथमा तीन वर्गका पुरोहितहरु पनि थिए ।
जब यी दश सरदारहरु आसाममा आए, त्यहाँको भूमि आफ्नै वंशहरुले ओगटेको पाए । यसकारण तिनीहरु लगातार पश्चिम तराई भूमिमा आए । त्यहाँबाट अझ पूर्व नेपालको पहाडी भूमिमा आए । तर, त्यो स्थान किरात आठ प्रमुख (राजा) हरुको अधिकारमा थियो । उनीहरुले ती आठ किरात प्रमुख सन्ततिको सार्वभौमिकतामा बसोबास गर्ने अनुमति माग गरे । आठ राजाले पनि मागबमोजिम उनीहरुलाई आ-आफ्ना राज्यमा बस्न दिए ।
फेदापमा आफ्नै पाराले शासन गरिरहेका आठ प्रमुख (राजा)हरुले शानमोकवानी दश सरदारहरुलाई आफ्नो सार्वभौमिकतामा बस्न दिएपछि लिम्बुवानको अर्को इतिहास सुरु भयो । ती आठ सरदारका संख्यामा तीब्र बृद्धि हुन थाल्यो । अन्तमा, यिनीहरु अर्कै एक नयाँ जाति भए, र यिनीहरुले आफूलाई याक्थुङ बंश भन्न थाले । जे भएपनि, ती सरदारहरुका सन्तान आठ राजाहरुमै गनिन्थे । तर, यो नौलो रैयतहरुका सन्तान औधी बढेको देखी ती आठ राजाहरुका मनमा राजनैतिक विद्रोहको शंका उत्पन्न हुन थाल्यो । यिनीहरुको जनसंख्या बढेपछि अदलमा राख्न कठीन पर्छ भन्ने शंकाले ती आठ राजाहरुले सल्लाह गरी यी नौला रैयतहरुलाई हरेक तवरले दबाएर राख्ने उपाय गरे । पहिलो जमिनमा तिरो बर्ढाई दिए । दोश्रो, निष्ठुर ऐन लागू गरे । तेस्रो, तिनीहरुसित दासझैं व्यवहार गरे । यस्तो अन्याय सहन नसकी यी दश सरदारहरुका रैयतहरुले पनि मतो गर्न थाले ।
अब, तिनीहरुले पान्थरको आम्बेपोजो-मा कामकेत लाङ्मा र सुमहेत्लुङ्मा भन्ने (फेदेन गढी) स्थानमा सभाको आयोजना गरे । सो भेलामा गम्भीर छलफलपछि सामन्ती शासनको विरुद्धमा विद्रोह गर्ने निर्णय गरे । तिनीहरु संगठित भई तीनवटा आँपको विरुवा रोपी पूजा गर्दै पवित्र पानी सिञ्चन गरेपछि प्रत्येक योद्धाले कसम खाए, सपथ लिए कि म युद्धमा विजय हासिल गर्नेछु वा मर्नेछु, युद्ध भूमिबाट तबसम्म घरमा फिर्ने छैन जबसम्म यो देशबाट ती सामन्ती राजाहरुलाई धपाउने छैन । कतै युद्धभूमि छाडी भागेमा तुरुन्त मृत्यु होस् भन्दै प्रत्येक ब्यक्तिले त्यो पवित्र स्थलमा सपथ ग्रहण गरे । अन्त्यमा, आफ्नै निर्णय र वाचा अनुसार नै कतिलाई मारे त कतिलाई देशबाहिर भगाए । यसरी, ती शानमोकवानी जनताले त्यो देशलाई तिनीहरु आफ्नैजस्तो गरी जफत गरे । यसपछि, फेरि तिनीहरुले त्यही आम्बेपोजो-मा भन्ने ठाउँमै ठूलो सभा गरे । आठ राजा मासिए । अब यो मुलुकको राजानेता को हुने? मुलुकको नाउँ के राख्ने भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भयो । सभामा र्सवप्रथम, • त्यो देशलाई धनुवाणको सहायताले जितेको हुनाले त्यसको नाउँ लिम्बुवान (लि- धनु, आबु-हान्ने, वान्- नाउँ लाउनु, अर्थात् लिम्बु भाषामा धनुवाणले जितिएको देश लिम्बुवान) राखे । • दोस्रो निर्णयानुसार, त्यो देश दश सरदारले मिली जितेको हुनाले बराबर दश मागमा विभक्त गरी शासन गर्नु पर्छ भन्ने राय बसाए । • तेस्रो, यो दश प्रदेश लिम्वुवानका बासिन्दाहरुलाई त्यसउप्रान्त दश लिम्बुका वंश हौं भनी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने ठहर्याए । • चौंथो, देशको साँध सीमाना लगाउनु पर्छ भन्ने निश्चय गरे, र लिम्बुवानको सीमाना उत्तरमा तिब्बत, दक्षिणमा मधेश, पूर्वमा मेची खोला र पश्चिममा अरुण नदी निर्धारण गरे ।
साथै, आ-आफ्ना राज्यमा शासन गर्न ४४ बुँदे राजनैतिक थिति संविधान, छ बुँदे धार्मिक नीति, १० बुँदे कृषि ऐन, र ४ बुँदे सामाजिक थितिसमेत तयार गरे । यी सबैलाई दश लिम्बुवानको थिति मानिन्छ ।
शाह र राणाका लिम्बुवानमा आक्रमणहरु
वि.सं. १८२९ को साउन महिनामा गोरखाका राजा पुथ्बीनारायण शाहले किरात राज्यहरुको विरुद्ध आक्रमण गर्ने योजना बनाए । वि.सं. १८३०मा गोर्खाली सेनाले लिम्बुवानमाथि खूनी हमला गर्यो । यस युद्धमा मेवाखोलाका शिया, आक्पा र मुकुम्बाहरुको ज्यान गयो । वि. सं. १८३१ बैसाक २५ गते गोर्खाली सेना रघु राना र लिम्बु सेनापति काङसोरेबीच मल्ल युद्ध भयो । वीरताका साथ लडिरहेको काङसोरेको षडयन्त्रपूर्वक हत्या भयो । वि. सं.१८३१ साउन २२ गते गोर्खाली सेना र लिम्बुबीचमा ऐतिहासिक सन्धि भयो । वि.सं.१८३३ मा विजयपुरे राजा बुद्धिकर्णको हत्या भयो । वि.सं.१८३७ मा नेपाल र अंग्रेजबीचको सुगौली सन्धि भयो । यसपछि लिम्बु तथा लेप्चा बसी आएको भू-भाग तीन भागमा विभाजित भई सिक्किम, लिम्बुवान र दार्जिलिङ भयो । वि.सं.१८४३ सालमा, रणबहादुर शाहको पालादेखि लिम्बुवान राज्यमा तिरो लगाइयो । चन्द्रसमशेरको पालामा लिम्बुहरुको मुन्धुम र धर्मग्रन्थहरु चैनपुरमा लगेर जलाइयो । वि.सं. १९०१ मा जंगबहादुर राणाले लिम्बुहरुको सम्पूर्ण राजकीय अधिकार खोसेर लिम्बुवान राष्ट्रलाई पल्लो किरात र राजा उपाधिलाई सुब्बा लेख्ने सनद जाहेर गरेर लिम्बु राजनेताहरुलाई आफ्नो कर्मचारीसरह बनाए ।
वि.सं.१९५२ को माघ महिनामा ताप्लेजुङ हाङपाङका बाजहाङ आङबुहाङलाई राणा शासनको विरोध गरेकोमा फुङलिङ बजार नजिक पात्लेको रुखमा झुण्ड्याएर मारियो । वि.सं. २०१७ साल पुस १ गतेको फौजी कारवाहीले लिम्बुवानको ऐतिहासिक सीमालाई तहसनहस गरी कोशी र मेची अञ्चलका पहाडी जिल्लाहरु इलाम, पान्थर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, संखुवासभा र धनकुटामा विभाजन गरियो । यिनै क्षेत्रहरुलाई योभन्दा पहिले पल्लो किरात लिम्बुवान भनिन्थ्यो । वि.सं. २०२१ सालमा लिम्बुहरुको पूर्ण अधिकार भएको किपट व्यवस्थामाथि भूमिसुधार ऐन लागू गरियो । पछि सरकारले नापी गरी मालपोत लागू गरेपछि किपटको अस्तित्व सकियो ।
विगतमा लिम्बूवानको अस्तित्व
तत्कालिन श्री ५ महेन्द्रबाट २०२१ सालमा ल्याइएको भूमिसुधार ऐनबाट पूर्णरुपमा लिम्बुवानको किपट प्रथा उन्मुलन गरी लिम्बुवानसँगको सन्धि उल्लंघन गरिएको छ । र, एक जाति, एक भाषा, एक धर्म, एक भेष, एक राज्यको नीतिअनुरुप लिम्बु भाषा, धर्म, संस्कृति, साहित्यप्रति घोर अन्याय गरियो । सोही अवधिमा किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान संघ २०३६ सालमा स्थापना भई झिनोरुपमा भाषा, धर्म, साहित्यको कार्य सुरुवात भयो । राज्यले एकाधरुपमा राज्य संयन्त्रमा लिम्बु जातिको प्रतिनिधित्व गराएपनि लिम्बु जातिको पक्षमा कार्य गर्ने वातावरण उपलब्ध गराइएको छैन । २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापश्चात् संविधानमा व्याख्या गरिएको बहुजाति, बहुभाषी, बुहसांस्कृतिक नेपालमा सबै जातजातिको भाषा, धर्म, संस्कृतिको विकास कायमै राखी राष्ट्रिय एकतालाई अझ बलियो बनाउने अवसर प्रदान भयो ।
मानव समाज वर्गीय र लैंगिक आधारमा मात्र नभई सांस्कृतिकरुपमा पनि विभाजित छ । नेपाली समाज ब्राम्हण, क्षेत्री, राई, लिम्बु, मगर, गुरुङ आदि जातीय आधारमा सांस्कृतिकरुपले बेगल पहिचान राख्दछ । सोहीअनुरुप आज लिम्बु युवा तथा विद्यार्थीहरु मानव समाजभित्र आफ्नो अस्तित्व र पहिचानको निमित्त संघर्षरत छन् । यद्यपि, नेपाल अधिराज्य मात्र भएको, तर राष्ट्र हुन नसकेको अवस्था छ । सदियौंको गौरवान्वित इतिहास बोक्ने लिम्बु जातिले आफ्नै भूमिमा दोस्रो दर्जाका नागरिकको व्यवहार झेल्नुपर्ने अवस्था छ । युवाहरु व्यावहारिक र वैज्ञानिक शिक्षा लिएर पनि राष्ट्र विकास, एकता कायम गर्नबाट बञ्चित भई लाहुर, मुग्लान र अरबजस्ता ठाउँहरुमा परदेशिनु पर्ने बाध्यता छ । फलतः सांस्कृतिक पहिचानको फैलावट र विकासको साटो सांस्कृतिक विकृति बढ्नुको साथै पश्चिमीकरणले व्यापकता पाएको छ । राज्यको विभेदकारी नीतिका कारण सरकारी र प्रशासन सेवामा लिम्बुहरुको उपस्थिति शुन्य छ । सरकारी कामकाजको भाषा केवल खस नेपाली भाषा मात्र राज्यले परिभाषित गरेको र राज्यले पूर्णतः मौलिक याक्थुङ भाषा बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याएको छ । लिम्बु युवाहरुलाई विदेशी सेवामा कार्य गर्ने वातावरण बनाई आर्थिकरुपमा पराधीन तुल्याइएको र लिम्बु समाज विशेषतः कृषि र पशुपालनमा निर्भर भएकोले उनीहरुको जीवनस्तर उकास्न राज्यले वैज्ञानिक कृषि प्रणाली र कार्यक्रम अगाडि नल्याउनुले लिम्बुहरुप्रति राज्यको आर्थिक विभेद नीति रहेको बुझिन्छ ।
सुरुदेखि मुन्धुम निर्देशित किरात धर्म मान्ने आदिवासी किराती लिम्बुहरुलाई पूर्णतः बेवास्ता गरी नेपाल केवल हिन्दूहरुको राज्य भनि संविधानतः हिन्दू अधिराज्य भनेर व्याख्या गरेकोले पनि दोस्रो दर्जाको धर्मावलम्बी भन्ने बुझिन्छ । मृत प्रायः संस्कृत भाषा जो कसैले पनि बोल्दैन अथवा अत्यन्त अव्यावहारिक भाषाका नाममा वर्षोनी करोडौं रुपैयाँ राज्यकोष खर्च गरिनु, तर आफ्नै श्रोत साधनमा प्राथमिक तहको लागि तय गरिएको याक्थुङ भाषाको आनिपान पुस्तक नकामको भनि ताप्लेजुङ जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जलाउनुजस्ता आपत्तिजनक राज्यको व्यवहार स्पष्ट छ । लिम्बु मातृभाषीहरु नेपालमा मात्र सन् २००१ को गणनाअनुसार तीन लाख ३३ हजार छ सय ३३ जना रहेका छन् । राज्यको व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाजस्ता संवैधानिक निकाय, निजामति र प्रशासनिक क्षेत्रका निर्णायक तहमा लिम्बु जातिको शुन्य उपस्थितिले राज्यमा शुन्यको हिस्सा पाएको स्पष्ट छ । आज लिम्बु युवा दृष्टिकोणमा भविष्य नेपालमा नदेख्नु र विदेश पलायनको मनस्थितिले पनि नेपाल आफ्नो राष्ट्र भएको महसुस गर्न नसक्नु हो, फलतः नेपाल केवल राज्य मात्र भएको तर व्यवहारिकरुपमा राष्ट्र हुन नसक्नु हो ।
यसरी, जातीय संस्कृतिहरुप्रति राज्यको बेवास्ता र विभेदित नीतिले गर्दा मौलिक पहिचान र चिनारीको संस्कृति संकटमा परेको र पश्चिमीकरणले व्यापकता पाउन सजिलो भएको छ ।
वास्तवमा मौलिक पहिचान र अस्तित्वको विकाससँगै समाज र राष्ट्र समृद्ध बनेको हुन्छ । एकल जातिको राज्य र विकासले सामाजिक द्वन्द्व बढाउँछ । आजको विद्यमान द्वन्द्व शदियौंदेखि नेपाली समाजलाई गरिएको व्यवहारको परिणाम हो । अतः यहाँका हरेक व्यक्ति, समाज, वर्ग, लिंग, जातजाति, सम्प्रदाय, धर्म, भाषा र संस्कृतिले फल्नु, फुल्नु पर्दछ । यसबाट सिंगो नेपाल सम्भ्रान्त बन्दछ, जसको निम्ति समावेशी समाजको निर्माण हुनु पर्दछ । यसको संरचनाबारे स्पष्ट किटान हुनुपर्दछ । हालसम्म गरिएको व्याख्याले एकलाई चोट पुर्याएको छ भने अर्कोलाई खुशी बनाएको छ । तर्सथ, राज्यको व्याख्या सच्याएर सबैलाई समानरुपले सम्मान गरी पुनर्व्याख्या र पुनर्लेखन गर्नुपर्दछ । पुनर्व्याख्यामा सबै जाति, वर्ग, लिंग समावेश हुनुपर्दछ र पुनर्संरचना गर्नुपर्दछ । यसबाट लिम्बु जातिको मौलिक पहिचान गराउने भाषा, धर्म, संस्कृतिको विकास, पुनरुत्थान हुनेछ ।
लिम्बूवानमा लिम्बू जातिको योगदान
बेगल मौलिक पहिचान र चिनारी भएको लिम्बु आदिवासी किराती जाति हो । मौलिक भाषा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, साहित्य, लिपि र भेषभूषा भएका लिम्बुहरु नेपालको पल्लोकिरात वा अरुण पूर्वको पहाडी भू-भागमा बसोबास गर्दछन् । नेपालमा ३५ लाख नौ हजार तीन सय ८९ जनसंख्या भएको यो जाति भारत, बेलायत, हङकङ, ब्रुनाई, सिंगापुरलगायत विभिन्न ठाउँहरुमा छरिएर रहेका छन् । आफ्नै सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिकस्वरुप बोकेको यो जाति हाल अस्तित्व साथै हक अधिकारको लागि प्रयासरत छ । मुन्धुममा आधारित किरात धर्म मौलिक धर्म हो भने भाषा, लिपि, साहित्य र संस्कृति हाक्पारे, पालाम, ख्याली, मेरिङ साम्लो, तुम्याहाङ साम्लो, मिक्वा साम्लो, मेखिम साम्लो, केलाङ आदि चिनारीका माध्यमहरु हुन् । त्यस्तै, धार्मिक अनुष्ठान सम्पन्न गर्ने मुख्यतः फेदाङमा, साम्बा, येबा तथा सेवासाबाहरु हुने गर्दछन् ।
लिम्बु जातिले आफ्नो अस्तित्वको निमित्त ऐतिहासिक यात्रा तय गरेको पाइन्छ । मानवशास्त्री र इतिहासविद्हरुका अनुसार मानव एक चलायमान जाति हो । यिनीहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा अस्तित्वको निमित्त संघर्ष गर्दै, घुमन्ते फिरन्ते अवस्था पार गर्दै, पशुपालन र कृषियुग हुँदै आधुनिक युगमा प्रवेश गरेका हुन् । यही क्रममा लिम्बुहरु चीनको युआन प्रान्तको शिचुवान प्रदेशमा बसोबास गर्ने शान मकवान जातिका थिए, र तिनै जातिका मानिसहरु थाइलैण्ड, भियतनाम हुँदै बर्माको उत्तरी भागमा बर्साईं सरे, जुन ठाउँलाई मङकवान भनिन्छ । बर्माको मेकङ नदी आसपासको उपत्यकामा विरोधीहरुसँगको भीषण युद्धमा धेरै जिउधनको नोक्सानी व्यहोरेपछि बाँकी दश जना युद्ध सरदारहरु आसामको कमरुप हुँदै आजको किरात प्रदेशमा बसोबास गर्न थालेका हुन् । तथापि, यिनीहरु चिनियाँ मूलका नभएर भोट-बर्मेली परिवारका सबैभन्दा पूराना जातिहरु हुन् । उनीहरु मंगोलियन नश्लका भएपनि चिनियाँ जातिसँग नजिकको सम्बन्ध छैन । इण्डो-मंगोलोइड नश्लका किरातीहरुको आगमन नेपालमा उत्तर तथा उत्तर-पूर्वी दिशाबाट भएको र अन्य जनजाति वा सम्प्रदायभन्दा पहिले आएका थिए । किरातीहरुले पश्चिममा काठमाण्डौ उपत्यकासम्म आर्थिक, सामाजिक गतिविधिहरु सञ्चालन गरेका थिए । विशेषतः पूर्वी पहाडी इलाकाहरु तामाकोशी, अरुणकोशी, तमोर उपत्यकाहरुमा भस्मे फाँडी मलिलो जग्गाहरुमा खेतीपाती गर्थे । अन्नपातका बीउविजन, भैसी, सुँगुर र अन्य जनावरहरु घरेलुकरण गर्दै कृषियुगमा प्रवेश गरेका थिए । काठमाण्डौको गोकर्ण केन्द्र बनाई उपत्यकाभित्र पनि खेतीपाती गरेका थिए । यही समयमा काठमाण्डौ उपत्यकामा खसहरु गाई, बाख्रा, भेडासहित घुमन्ते, फिरन्ते अवस्थामा मातातीर्थ केन्द्रित भइरहने गर्थे, जो इण्डो-आर्यन भाषा बोल्दथे । उपत्यकाभित्र किराती गोत्रका भोट बर्मेली भाषा बोल्नेहरु र खसहरुबीच सामाजिक सम्बन्ध सुमधुर थियो । खसहरु -गोपालवंशी पनि भनिन्छ)ले किरातीसँग खेतीपाती गर्न सिकेका थिए । यसरी, उपत्यकाभित्र दुबै जातिले खेतीपाती र जनावरहरु घरेलुकरण गरेकाले पहिलोपटक नयाँ किसिमको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था सुरुवात भएको हो ।
यहीक्रममा गोपाल वंशीअनुसार ३२ पुस्ता, कर्कपेट्रिक वंशावलीअनुसार २७ पुस्ता, डेनियल राइट वंशावलीअनुसार २९ पुस्ता, इतिहास प्रकाशनअनुसार २५ पुस्ता, प्रेमबहादर माबोहाङका अनुसार ३३ पुस्तासम्म किराती राजाहरुले काठमाण्डौ उपत्यकामा शासन गरेका थिए । बौद्ध दर्शनबाट किराती राजाहरु प्रभावित भएका थिए । सातौं किराती राजा जितेदास्तीको पालामा स्वयम्भु चैत्य र मञ्जुश्री चैत्यको दर्शन गर्न गौतम बुद्ध आई १३५० शिष्यहरु बनाएको भनिन्छ । किरात वंशलाई लिच्छवीहरुले धपाएपछि पूर्वतिर लागेका हुन् । यसरी पूर्व लाग्नेहरु राई, लिम्बु, याक्खा, धिमाल, मेचे, कोचे, सुनुवार आदि हुन् । त्यसताका काठमाण्डौ एउटै किरात प्रदेश थियो । वल्लोकिरात, माझकिरात, पल्लोकिरात भनि भू-भाग विभाजन गर्ने काम गोरखा राज्यको विस्तार क्रममा भएको पाइन्छ । किराती शब्द समूहवाचक वा राजकीय हो भने विभिन्न मूल्य, मान्यता, भौगोलिक, सांस्कृतिक स्थिति, भाषिकरुपले गर्दा खम्बु, लिम्बु, याक्खा, सुनुवार, जिरेल, सुरेल, मेचे, कोचे र धिमालको रुपमा विभाजित भएका हुन् । तर, धेरै सामाजिक मूल्य, मान्यतामा सामिप्यता रहेको छ । यसरी, अरुणपूर्व रहेका किरातीहरुमध्ये लिम्बु जातिहरुमा आफ्नो छुट्टै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक संरचना रहन गएको हो । उनीहरुमा बौद्ध धर्मदर्शनले कुनै प्रभाव नपारेको पाइन्छ, किनकि आफ्नै मुन्धुम दर्शनबाट निर्देशित सामाजिक अवस्था र स्वायत्त कृषि प्रणाली हुनुको साथै आपुंगी राजनीतिक प्रणाली वा विभिन्न सरदारी प्रथा वा प्रणाली रहेको थियो । जसमध्ये विजयपुर गढी सबभन्दा शक्तिशालीरुपमा रहेको थियो । विभिन्न समयमा विभिन्न थुमका प्रमुखहरुलाई लालमोहर प्रदान गरेको पनि पाइन्छ । तमरखोला, माइखोला, मेवाखोला, याङरुप, आठराय, पान्थर, फेदाप, चारखाल, चौबीस, छथरजस्ता थुमहरुले विजयपुरमा सम्बन्ध राखी आफ्ना थुमहरुमा आपुंगी राज गरेको र सम्बन्धन प्राप्तिको लालमोहर लिने गरेको र लिम्बुवान संघीय प्रणालीअनुरुप सञ्चालन भएको पाइन्छ । लिम्बुवानमा धेरै समयसम्म उत्तरको भोट क्षेत्रबाट र पूर्वको सिक्किमबाट कयौंपटक आक्रमण भएको थियो, फलतः सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अवस्था कमजोर हुन पुग्यो । भनिन्छ, भोटबाट आउने लामाहरुले किराती पुरुषहरुलाई खोजीखोजी मार्ने गर्दथे, र धेरै समयसम्म किराती नारीहरुले आफ्ना पुरुषहरुलाई लुकाएर बचाएका हुन् । लामाहरुको भेषमा डमरु र घण्टी बजाउँदै घरघर चहारेको भन्ने मत रहेको छ । त्यस्तै, सिक्किमका लाप्चाहरुले पनि धेरैपटक आक्रमण गरेको पाइन्छ । तथापि, समयसमयमा भोटसँग व्यापारिक र वैवाहिक सम्बन्धहरु भएका थिए । त्यसताका वस्तु विनिमय प्रणाली थियो । लिम्बुवानमा कपासबाट धागो बनाई लुगा बनाउने, प्रशस्त कृषि उत्पादन गर्ने र पशुपालनजस्ता मुख्य आर्थिक गतिविधिहरु हुन्थे ।
लिम्बुवानको सामाजिक व्यवस्था पूर्णतः मौलिक थियो । मुन्धुम मुख्य स्रोत वा अलिखित कानुनसरह थियो । यसलाई येत्हाङहरुले समयसमयमा परिभाषित गरेको अनुमान छ । येत्हाङहरु को थिए भन्ने प्रश्न रहेपनि सोधुङगेन लेप्मुहाङ, कान्देनहाङ, माबोहाङ, सिरीजंगाहाङ, मुहिगुम अङसीमाङ फाल्गुनन्द लिङ्देन आदि किरात दर्शनका मुख्य प्रवर्तकहरु हुन् । सामाजिक व्यवस्थापनका निमित्त गरिने सम्मान, पुरस्कार, दण्ड, सजाय, प्राकृतिक श्रोत साधनको व्यवस्थापन, थिति थाम्ने, नीति, नियम निर्माण गर्ने कार्य तुम्याहाङहरुको निर्णयमा आधारित हुन्थ्यो । यदि एक जना तुम्याहाङले अस्वीकार गरेमा निर्णय असम्भव हुन्थ्यो ।
इशाको एघारौं शताब्दीमा लिच्छवी राज्य टुक्रेर धेरै राज्यहरु बन्न थाले । चौधौं शताब्दीमा मल्लहरुले काठमाण्डौ कब्जा गरे । यहीबेला मल्ल राजा जयस्थिति मल्लले हिन्दू दर्शनबाट प्रभावित भई समाजलाई पेशागत आधारमा ब्राम्हण, क्षेत्री, वैश्य र शुद्र गरी चार जातमा विभाजन गरे । चौधौं शताब्दीमा भारतमार् इश्लाम धर्मको जेहादका कारण पहिलोपटक ब्राम्हण, ठकुरीहरु नेपालको पश्चिम कर्णाली इलाकाहरुमा खसहरुसँग शरण लिई लुक्न थाले । त्यस्तै, द्रव्य शाहको राज्य प्राप्तिसँगै गोरखा राज्यको स्थापना भयो, र काठमाण्डौ उपत्यकाको शासक भएपश्चात् चौबीसे बाइसे र किरात प्रदेशहरुको समेत महाराजा हुने चाहनाले क्रमशः मकवानपुर हुँदै बाइसे, चौबीसे, चौदण्डी, विजयपुर हात पारेपछि लिम्बुवान पनि हात पारे । कतिपय थुमहरुले सम्झौता गरे भने कयौंपटक लिम्बुवानसँग हार खानु पर्यो । यही क्रममा चैनपुरमा गोरखासँग भीषण लडाइँ भएको थियो ।
लिम्बुवानका सेनापति काङसोरे थिए भने गोरखातर्फा रघुवीर राणा थिए । रघुवीर राणा र काङसोरेबीच भएको लडाईंमा रघुवीर मारिए । अन्त्यमा, हारजीत नभएपछि सम्पूर्ण सेनाहरु बिनाहतियार उपस्थित भए । तर, तत्कालै गोरखा सेनाहरुले बालुवामा लुकाई राखेको तरवार झिकी काङसोरे मारियो । र, पुनः भीषण युद्ध भयो । यसरी, विभिन्न कारणवश वि.सं. १७७४ मा लिम्बुवान नेपालमा गाभियो । त्यसताका हिन्दूकरण नमानी आफ्नै येत्हाङ थितिमा चल्ने आधारमा किपट प्रणालीअन्तर्गत सम्झौता भएको थियो । जसमा लिम्बुवान भूमिमाथि लिम्बु जातिको मात्र अधिकार रहेको थियो । उनीहरुले दक्षिणपूर्वी र पूर्वी भागबाट हुने आक्रमणको प्रतिरोध गर्नुपर्ने शर्तमा लिम्बुवान गाभिएको थियो । न्यूनरुपमा कर शाहवंशी राजालाई बुझाउनु पर्दथ्यो । तत्पश्चात् लिम्बुवानमा पहिलोपटक बाहुन, क्षेत्री, मगर, गुरुङहरु चौबीसे, गोरखा, मकवानपुरबाट बसाईं सरे, र नयाँ सामाजिक संरचना सुरुवात भयो । विभिन्न प्रलोभनहरु देखाई लिम्बुवान समाजलाई टुक्राउने क्रम जारी रह्यो, लिम्बुवानमा सुब्बा नियुक्ति गर्ने प्रचलन ल्याइयो । जसमा ६० मुरी फल्ने जग्गा रैकर गराएपछि सुब्बा नियुक्त गरिन्थ्यो, र सुब्बाहरुले आफ्नो रैती राखी तिरो कर उठाउने प्रचलन सुरुवात भयो ।
यसरी धेरै लिम्बुहरु सुब्बा हुने सुरमा आफ्नो किपट भूमि रैकर बनाई गुमाए । लिम्बुवानमा पछि पनि सिक्किमबाट आक्रमण भइरह्यो । त्यहीबेला पान्थरका ५२ सुब्बाहरु योङहाङ सुब्बाको नेतृत्वमा काठमाण्डौ आई रणबहादुर शाहसँग युद्ध गर्न हतियार माग गरे । रणबहादुरले ढाल, तरवार, त्रिशुल, नगरा, निशान, बन्दुक, शंख, नरसिंगा मौलो थापी दसैंको नवमीको दिन बलि चढाउनु पर्ने शर्तमा दिई पठाए । यो पहिलोपटकको सांस्कृतिक अतिक्रमण थियो । दसैंको कर पनि असुल्न थालियो । मौलो काटेको पञ्जाको निशानको लागि लिम्बुवानमा धेरैपटक तिलिंगा आतंक मच्चाइयो । वि।सं. १९१० मा जंगबहादुर राणाद्वारा ल्याइएको मुलुकी ऐनमा अपमानजनकरुपमा नमासिन्या मतवाली लिम्बु जाति भन्दै व्याख्या गरिएको र गाई हत्या मानव हत्यासरह अपराध हुने कानुन ल्याइएपश्चात् नेपाली समाजमा असमानपूर्ण व्यवहार जातको आधारमा गरिन थालियो । छथर थुमका आठ पहरिया राईहरुले दसैं नमान्ने भनी प्रतिरोध गरे, र विद्रोह गरेपछि रामलीहाङ र दीक्षमा मारिए । २००७ सालमा जहानियाँ राणा शासनविरुद्धको जनक्रान्तिमा जि.वि. याक्थुङबा, बि. बि. चेम्जोङ र रामप्रसाद राईजस्ता जनसेनानीहरुले क्रान्तिको अगुवाई गरेका थिए । तर, उनीहरुलाई केवल सत्ता हत्याउन प्रयोग गरी अन्त्यमा फालिएको थियो । राणा शासनकालमा भाषा, धर्म, साहित्य, संस्कृतिको जगेर्ना र विकासको सवाल गम्भीर अपराधसरह थियो । तथापि, दोस्रो विश्वयुद्धताका इमानसिं चेम्जोङ, मुहिगुम अङसीमाङ फाल्गुनन्द लिङ्देन र त्येअङसी सिरीजंगाबाट उल्लेखनीय कार्यहरु भएका छन् । इमानसिं चेम्जोङद्वारा गरिएको इतिहास, भाषा, साहित्यप्रतिको योगदान, लिम्बुवान सुधार संघ, फाल्गुनन्दद्वारा गरिएको किरात धर्मदर्शन, सत्य धर्म मुचुल्का र विभिन्न योगदान, त्येअङसी सिरीजङगा सिंथेबेबाट गरिएको भाषा प्रचारप्रसार र सर्म्बर्द्धनसम्बन्धी योगदान लिम्बु जातिको पहिचान र अस्तित्वसँग जोडिएको छ ।
लिम्बूवानको सीमासम्बन्धी अवधारणा
१) लिम्वुवानको पूर्वमा मेची नदी, पश्चिममा सिस्वा/संखुवा खोला अरुण हुदै सप्तकोशी, उत्तरमा तिव्वत र दक्षिणमा भारत विचको नेपालको ९ जिल्लाहरु १) ताप्लेजुङ २) पान्थर ३) ईलाम ४) झापा ५) संखुवासभा ६) तेह्रथुम ७) धनकुटा ८) सुनसरी ९) मोरङ यी क्षेत्र ऐतिहासिक आधारमा लिम्वुवान भएकोले लिम्वुवान स्वायत्त राज्य हुंदा उक्त उल्लेखित क्षेत्र लिम्वुवान राज्य हो।
सन्दर्भः विभिन्न लेखहरू
Posted by ऐत राज तुम्रोक at 10:050comments
मेरी लक्ष्मी भाउजु" - संगिता घिमिरे, हाल इजरायल
संगिता घिमिरे, ललितपुर
गरिबी र दु:खले थिकिएकी धनेको श्रीमती लक्ष्मी जति नै दु:ख र कष्ठ खप्नु परे पनि कहिले अधेरो र निन्याउरो अनुहार लगाउदिनथिन । धनेसँग विवाह भएपछि सधैं दु:ख अनि सुखमा साथ दिदै आएकी छिन् । धने दिनभरी अरुको काम गर्न जान्छ भने लक्ष्मी नजिकैको स्कुलमा पियनको काम गर्छिन । एक छोरो अनी एक छोरी र उनीहरु दुइजना जम्मा गरी चार जनाको सुखी परिवार छ । आफुले स्कुलबाट कमाँको कमाईले छोराछोरीलाई पढाउन पुग्दैन । त्यही भएर साँझ बिहान अरुको काम गर्न पनि जान्छिन लक्ष्मी । धनेले कमाएको पैसाले जिनतिन गर्जो टरेको छ । तर यो दु:ख र सुखको उतारचढाबले पनि धने लक्ष्मीको माया र बिश्वासमा कुनै कमी आएको छैन । सधैं भर्खरै नब दुलाह दुहली जस्तै मायालु देखिन्छन । वरिपरीका छरछिमेकीले पनि उदाहरण दिनु पर्‍यो भने धने लक्ष्मीको नै दिने गर्छन की जोडी होस् त धने-लक्ष्मीको जस्तो । मलाई पनि गर्ब लाग्थ्यो त्यो जोडी देखेर । कल्पनामा रमाउने गर्थे कहिलेकाहीं दु:ख सुख जे भए पनि मेरो पनि यस्तै सुन्दर संसार होस्, यस्तै माया गर्ने श्रीमान अनी साथमा यस्तै २ वटा भन्ट्यान भुन्टुङ हुन । दु:ख त के हो र आफ्नोको साथ छ भने त ढुङ्गामा पनि संसार बनाउन सकिन्छ । सुखले मान्छेलाई घमन्डी बनाउछ, होस् मलाई घमन्डी बन्नु छैन । मलाई त सबैको साथमा हाँसेर जिउने रहर छ । म यस्तै कल्पनामा डुब्ने गर्थें । धने दाईको खुशीमा नै म त मस्त हुन्थें । धने दाईले धेरै पढ्नु भएको थिएन तर धेरै व्याबहारिक हुनुहुन्थ्यो । मओबादीको चहल पहल पछि हाम्रो गाउँबाट धेरै युवाहरु बिदेश पलायन भए । बिदेश गएका छिमेकी भाईहरुले धेरथोर कमाएर पठाउन थाले पछि धने दाईलाई पनि बिदेश पस्ने रहरले कुत्कुताउन थाल्यो । श्रीमतीलाई गलाभरीको तिल्हरी लगाइदिने अनि बाबु नानीलाई राम्रो बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने सपना देख्न लागे । आखिर सबैले देख्ने साधारण सपना नै थियो त्यो । कुन श्रीमानलाई रहर नलाग्ला र आफ्नो श्रीमतिले राम्रो लगाएर हाँसी सुखले अरु साथी भाईसँग रमाएको देख्न ? कुन बाउलाई रहर नलाग्ला र आफ्नो छोरा छोरीले राम्रो बोर्डिङ स्कुल पढेको देख्न ? यस्तै धने दाईलाई पनि रहर लाग्नु स्वभाविकै थियो ।
मनभरि यस्तै कुरा खेलाउदै धेरै दिन बिताए धने दाईले तर भाउजुलाई बताउने आँट भने गर्न सकेका थिएनन् । लक्ष्मीले के भन्ली ,जान देली की नदेली आदि आदि कुराले पिरोलेको थियो । म यहाँबाट हिंडे पछि कसले साथ दिन्छ होला मेरी लक्ष्मीलाई ? विवाह भएपछि आज सम्म एक रात पनि छुटिएका छैनौ हामी । अब कसरी छुटिएर बस्न सकिएला त खै ? धने दाई बिदेश जानु भन्दा पहिला नै बिछोडको पिडामा डुबिसकेका थिए । अब जे हुन्छ हुन्छ भनेर लक्ष्मीलाई यो कुरा बताउने आँट गरे । साँझ छोराछोरीले खाना खाइवरी सुत्न गइसकेका थिए । लक्ष्मी भाउजु मात्रै धने दाईलाई पर्खिदै बसेकी थिन अङेनाको डिलमा साथैमा बसेर खाना खाउला भनेर । धने दाई घर भित्र पस्ने बितिकै लक्ष्मी भाउजुले भनिन होइन कहाँ हराएका हुन यी बुढा दिनभरि आज ? अनुहार पनि मधुरो देख्छु । होइन हो बुढा तिमीलाई के समस्या आइपर्यो हँ ? सधैं हाँसी खुशी घर भित्र पस्ने बुढाको अधेरो अनुहार देखे पछि लक्ष्मी भाउजुले कसरी नसोधी बस्न सक्थिन र ? धने दाईले आङ कनाउदै भने मेरी लच्छु ! हेरन पल्लाघरे काकाको छोराले पनि बिदेशबाट पैसा पठाउन लागिसकेछ । आज काकाले भन्नु भएको खै काठमाडौंको कुन्नी कुन ठाउँमा जग्गा लिनु पर्‍यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो । अब हामी नै यहाँ सबै भन्दा गरीब हुने भयौं । भोली सबैले हामीलाई हेप्छन होला है भन्दै आफ्नो कुरा राख्ने बाटो बनाउदै थिए धने दाई । त्यो त हो नी बुढा अब सबै धनी भए पछि रहन सहन सबै परिबर्तन हुन्छ अनी हामीलाई यसो ऐंचो पैचो लिन जान पनि गाह्रो हुन्छ नी । तै पनि अरु के उपाय छ र हाम्रो । यसरी नै चलाउदै जाउला नी । आज पनि चलेकै छ भोलि पनि चल्छ धन्ना नमान बुढा भन्दै सान्त्वना दिइन भाउजुले । तर धने दाईले यही मौकामा प्याच्च भनिहाले म पनि जान्छु है बिदेश ? लक्ष्मी भाउजुले एकपल्ट बुझिनन् के अरे ! केरे केरे बुढा फेरी भनत के भनेको मैले सुनिन भनिन् । धने दाई डराइ डराइ तिनै वाक्य दोहोराउदै गए म पनि बिदेश जान्छु अब । हातमा भएको पानीको अंखोरा भैमा खसेको पत्तै पाउनु भएन भाउजुले । होइन के भन्दैछौ हँ बुढा तिमी ? बिदेश जान्छु रे होइन कसले उकास्यो आज तिमीलाई ? हिजो सम्म जति दु:ख भोग्नु परे पनि भोग्छु तर तिमीलाई छाडेर कही जान्न भन्ने मान्छे आज बिदेश जाने कुरा कसरी भन्न सक्छौ तिमी ? यति भन्दै नजिकैको चकटिमा थचक्क बसिन लक्ष्मी भाउजु । भारी मन बनाउदै सम्झाउन लागिन धने दाईलाई हेर बुढा दु:ख सुख त संसारको रित नै हो । आज दु:ख त भोलि सुख । तर हाम्रो साथ छ भने यो दु:खलाई सुख बदल्न सक्छौ । तिमी छौ र पो म पनि जति दु:ख पनि सहन सकेकी छु । तिमी नै छैनौ भने म कस्को आड र भरोसामा बस्ने ? भकानिएको मन थाम्न सकिनन लक्ष्मी भाउजुले । थुचुक्क बसेको धने दाइको काखमा घोप्टो परेर रुन लागिन । धने दाईको पनि आँखा नरसाएका होइनन् तर छोरो मान्छे रुनु हुदैन रे भन्छन । त्यहि सम्झिंदै आँखामा निस्केको आँशुलाई आखामा नै लुकाएर लक्ष्मीलाई सम्झाउन लागे । धेरै कुरा गरेर भाउजुलाई सम्झाइ छाडे धने दाइले ।
यसरी सबै व्यबहार मिलाएर काठमाडौंमा रहेको एउटा नाम चलेको म्यान पावर कम्पनीबाट बिदेश हानिए धने दाई । खाउँ खाउँ लाउँ लाउँ भन्ने बेलाको उमेरमा यसरी बुढाले चटक्कै छाडेर हिंडेको देखेर लक्ष्मी भाउजु भित्र भित्र जलिरहिन । २ जना छोराछोरीको जिम्मा अब लक्ष्मी भाउजुको नै थाप्लोमा थुप्रिएको थियो । हिजो सम्म बुढाको काखमा रमाएकी लक्ष्मी भाउजु आज बिल्कुलै र एक्लो भएको महशुस गर्न लागिन । तर जे सुकै भए पनि अब सहनु शिबाय केही थिएन । धने दाईले बिदेश पुग्ने बितिक्कै फोन गरे लक्ष्मी भाउजु र छोराछोरीलाई । काम राम्रो भएको बताए दाईले । तर उनीहरु बिनाको दिन रात कटाउन धेरै गाह्रो भएको कुरा पनि बातएछन फोनमा ।
यसरी बिदेश गएको झन्डै १ बर्ष सम्म त प्राय: जसो फोन गर्ने अनि बेला बेलामा पैसा पठाउने गर्नु भयो धने दाईले । तर समय बिस्तारै परिवर्तन हुन थाल्यो । हरेक हप्ताको १ पल्ट फोन आउने समय पनि छोंटिन लाग्यो । महिनाको दोस्रो हप्तामा बाबु नानुको लागि आउने पैसा पनि बिस्तार आउन छाड्यो । अब त्यो गाउँको धने दाईमा पनि बिदेशी हावा लागिसकेको थियो । आफ्नी प्राणप्यारीले लगाएको ढुंग्री ,तिल्हरी ,मंगलसुत्र बन्दकी राखेर हिंडेको धनेले आफुले देखेको सपना सबै भुली सकेको थियो । कमाएर जमाएर दिने कुरा त कहाँ थियो कहाँ भएको सबै गुमाउनु परेको थियो लक्ष्मी भाउजुले । अनपढ थिन तर मनको धेरै सफा र पवित्र थिइन मेरी लक्ष्मी भाउजु । समय यसरी नै बित्दै गयो । धने दाई बिदेश लाग्नु भएको पनि ५ बसन्त पुरा भएर छैटौ बसन्तमा प्रबेष गरिसकेको थियो । यही बेला धने दाई १ महिनाको छुट्टी मनाउन नेपाल फर्किए । पहिला गाउँमा बस्ने धने कहाँ को अहिले बिदेशबाट फर्केर आएको धने दाई कहाँ को ? मोटाएछन ,गोरा भएछन । देख्दै खाइलाग्दा भएछन । यसरी लक्ष्मी भाउजुको धने गाउँ आएको देखेर गाउँभरि सबै खुशी भएका थिए । लक्ष्मी भाउजुको पनि खुशीको सिमा थिएन । तर यो खुशी धेरै दिन टिक्क्न सकेन । धने दाई अचानक बिरामी परे । बिरामी परेका धने दाईले काठमाडौं आएर आफ्नो रगत जँचाए । रगतको रिपोर्ट आएपछि थाहा पाए की उहाँलाई एच.आइ.भी. एड्स लागेको रहेछ । यो रिपोर्ट हेरेपछि बल्ल धने दाईलाई आफुले बिदेशमा गरेको मस्तीको याद आयो । जथाभाबी जे जे मनमा लाग्छ त्यहि गर्दै हिंडेको याद आयो धने दाईलाई । अब लक्ष्मीलाई के भएको रहेछ भनेर भन्दा के उत्तर दिने होला भन्ने चिन्ताले पिरोल्न लाग्यो धनेलाई । रिपोर्ट लिएर घर फर्कियो धने । धन कमाउन बिदेश गएको धने आज रोगको पोको बोकेर फर्किएको महसुस भयो आफैलाई । यसरी बिस्तारै थला पर्दै गए धने । नेपाल फर्किएको केही महिना नबित्दै धने दाईको म्रुत्यु भयो । अब धने दाई कहिले पनि नफर्किने गरी गए सधैंको लागि लक्ष्मी भाउजु अनी ती दुई कोपिलालाई छाडेर । बिदेश गएर धन कामएर सुन्दर संसार बनाउने सपना देखेका धने दाईले आफ्नो भएको संसारलाई नै गुमाउनु पर्‍यो । धने दाईको म्रुत्युले लक्ष्मी भाउजु माथि ठुलो बज्र प्रहार भयो । सहन सक्ने क्षमता थिएन अब भाउजुमा पनि । यही बियोगले भाउजु दिन प्रति दिन गल्दै जानु भयो । धने दाईले कमाएर ल्याउनु भएको एच.आइ.भी. एड्स भाउजुमा पनि सारिसकेको रहेछ । यो कुरा गाउँभरि फैलियो । पहिला लक्ष्मी भाउजुलाई लक्ष्मी माताको सम्मान गर्ने तिनै गाउँलेले गाउँ निकाल गरिदिए एच.आइ.भी. लागेको कुरा थाहा पाएर । बस्ने खाने कुनै कुराको ठेगाना भएन । न कहिं गएर बस्ने ठाउँ नै थियो । ती दुई छोराछोरीलाई लिएर काठमाडौं पसिन । रोग र शोकले थलिएको शरिरले न कसैको साहारा पायो न त कसैको माया । त्यसमा पनि साथमा रहेका ती दुई कोपिलाको चिन्ताले झन थला परिन लक्ष्मी भाउजु । यसरी यताउता भौतारिदा भौतारिदै लक्ष्मी भाउजुको पनि म्रुत्यु भयो ।
ती भर्खरै फक्रिन लागेका दुई कोपिलाको कसले हेरबिचार गर्ने त अब ? मृत आमाको शरीरमा लुटपुटिदै रोइरहेका ती स-साना बच्चाको भबिष्य कस्तो होला त अब ? धने दाईले राम्रो बोर्डिङमा पढाउने सपनालाई कहिले पनि नभुलेका भए ,जे जे मनमा लाग्छ त्यहि गर्दै नहिडेको भए आज मेरी लक्ष्मी भाउजु पनि यो संसारमा हाँसी खुशी नै हुन्थिन होला । आफ्नो परिवारबाट टाढा हुँदैमा आफुले आफुलाई स्वतन्त्र र किलाबाट फुकेको पशुले झै जथाभाबी गर्दै हिंडेपछि सपना सपना मा नै सिमित हुन्छ । यहाँ सम्म की आफुसँग भएको सबै कुरा गुमाउनु पर्छ र बाँचेकाको जिन्दगी पनि नरक समान हुन्छ । हाम्रै सानो लापर्बाही र र गलत बिचारले नै सुन्दर संसारमा आगो लगाउन पुग्छौ । स्वदेशमा होस् या त बिदेशमा होस् केही काम गर्नु भन्दा पहिला अर्थात कुनै कदम चाल्नु भन्दा पहिला हामीले खाली दिमागले सोच्ने गर्नुपर्छ । आफु भन्दा पछाडि को को छन् अनी आफुले गरेको गल्तीको सजाय क-कसले भोग्नु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझ्नु नै पर्दछ । हामीले मायाले जन्माएका हाम्रा सन्ततीहरु सडक पेटिका खाते बालबच्चा नबनुन् । हाम्रो रगतलाई अरुले खाते भनेर नपुकारुन । र आफ्नो रगतलाई अरुको उपहासको पात्र बन्न नदिउ !!!
Posted by ऐत राज तुम्रोक at 07:130comments
होमनाथ सुवेदीहोमनाथ सुवेदीको पत्र-साहित्यको मालाको रुपमा प्रकाशन गर्दै जाने क्रममा यी पत्रहरु क्रमशः प्रकाशन गरिएको छ -सम्पादक श्री पि्रय प्रकाशसुभाशीर्वाद अमेरिकामा हामी सबै परिवार सँन्चै छौं । त्यहाँ तिमी एक्लै भयौ । परिवार सबै यता परियो । हाम्रो मन तिम्रो माया र वियोगको पीडाले भरिएको छ । तिम्रो स्वाथ्य राम्रो रहोस् । हाम्रो यही कामना छ । कान्छो भएर जन्मनु नारी भएर जन्मनु हरुवा भएर जन्मनु शत्रुलाई पनि नपरोस् । यसले मान्छेलाई सबभन्दा बढी एकाकी दयनीय शोषित पीडित र पिछडिएको बनाउँदो रहेछ । म दूर देशमा छु तर आज मलाई मेरै देशमा भएको कान्छो छोरो उसको आफ्नो देशमा भए पनि ऊ नै दूर देशमा भएको अनुभव भइरहेछ । त्यसैले मन काटिएर यो चिठी लेख्दैछु । तिम्रो दाजु दुई ढाई वर्ष अगाडि नै अमेरिका आए । ममी र बहिनी नि २ ४ महिना नै भैसक्यो तिमीलाई एक्लै छोडेर यता आइसकेका छन् । नातिलाई हेरविचार गर्ने जिबा जिआमा पनि यतै आएर बस्नुभएको छ । तिमी त्यहाँ एक्लै छौ । ममीको यादले तिमीलाई सताइरहेको होला । अरुलाई अमेरिका बोलाउने कागजपत्र गर्दा तिमीलाई पछि गरौंला भनेर वास्ता गरिन । ऐले पछुताएको छु । जेठो छोरो पुरुषोत्तम पाउँदा जन्मदाको खुशी र जेठी छोरी शोभा जन्मदाका लाडप्यार तिमी कान्छालाई दिन पाएको पनि कहाँ हो र रस त मजासित जेठो छोराले लिइवरी बुहारी लिएर हिड्दा रहेछन् । कान्छा बेचरा मन मरे पछिका सन्तानले ल्याडप्याड कहाँ प्यार पाउनु र त्यसमा पनि आमाबाबु थाकिसकेका हुन्छन् । बाबु डाँडाकाँडा हेर्ने आमाको कोरा मायाले मात्र कान्छाको उद्धार कसरी हुने यस्तै भएर रहेछ कान्छो छोरा पछि पर्ने । म त्यसो हुन दिन्न । मेरो मन त्यस्तो पक्षपाती छैन । सबै कान्छा खराब कहाँ हुन्छन् र प्रगति गरेका माया पाएका कान्छा पनि त छन् । तिमीले त्यस्तो असल कान्छो बन्नुपर्छ । कान्छो छोरो पनि मान्छे हो र दाजुको मात्र खोइरो खन्न हुन्न भनेर तिम्री ममीले तिमीलाई भनेकी थिइन् रे त्यस बेला तिमी बेपत्तासित रोएका थियौ रे ! हो तिमी त्यस्ता छैनौ भन्ने कुराको प्रमाण हो यो भन्ने ठानेको छु मैले । तिमी त्यस्ता छैनौ पनि । एक्लै तिमी बस्नुपरेको छ कसो गर्ने त्यस बेला हाम्रो परिवार आर्थिक संकटमा थियो । म नै देश छोडेर समुद्रपार हराएँ । तैपनि आजसम्म त तिम्रो भोक तिर्खा हेर्ने आमा त साथमा थिइन् । ऐले त तिम्री ममी दाजु बहिनी सबैलाई तिमीबाट अलग छुटाएर अमेरिका ल्याए पछि त ऐले मलाई लागेको छ - तिमीले के अपराध गरेका थियौ र तिमीलाई मात्र त्यो कोही नभएको देशमा किन छोडेको कुनै नराम्रो कारणले तिमीलाई अमेरिका नल्याएको हैन । काम गर्दै जाँदा तिम्रो पालो पछि परेको मात्र हो । ऐले मलाई लाग्छ -कान्छा हुने छोरालाई यस्तै यस्तै पछाडि पर्ने बेवास्ता हुने अथवा बाबुले सेवा पुराउन नभ्याउने हुन्छन् होला अनि कान्छाहरु पछि न परे को पर्ने कान्छाहरु दुःखी नभए को हुने कान्छा शाशित र दास मात्र नभए के हुने बाबुलाई कान्छाप्रनि माया नभएको हैन प्रकाश ! जानेर अरु पहिले ल्याएर कान्छा छोराको पालो पछाडि पारेको हैन । प्रकाश परिवन्दले यस्तै पर्न आयो । तिमी एक्लै काठमाडौंमा छौ । एक्लै कसरी पकाउने खाने बस्ने गरेका छौ पकाउने भान्से त राखेकै छ तैपनि आमाले बाबुले प्यारले खान दिए जस्तो कहाँ हुन्छ र हाम्रै पनि यहाँ एक्लै पेट भरिन्न । खान मन लाग्दैन । प्रकाश ! यौटा छोरा तिमीलाई दूरदेशमा राखेर हामी देशान्तरमा बस्दा हामी जतिसुकै वैभवशाली देशमा भए पनि खाएको आँगमा लाग्दैन । ममी नन्दाको त हरएक दिन झगडै त्यही छ कि प्रकाशलाई अमेरिका किन न बोलाएको !आमाको मन हो । किन न रोओस् ! परिवारको सम्मिलन कुन बाबुलाई प्यारो हुन्न तिमीलाई पनि त्यहाँ एक्लै बस्दा कम गाह्रो हुन्न । तर प्रकाश ! कुनै पनि कुरा बेला नआइहुन्न । बि्रज नआएसम्म पर्खनुपर्छ । जबर्जस्ती गरेर हुन्न । प्रतीक्षा एक परीक्षा हो । यसमा टिक्न सक्नुपर्छ । म तिमीलाई र कल्पना दिदीलाई बोलाउने कागजपत्र चाँडै नै पठाउँछु । समुद्र वारिपारिका बसाइसराइको कुरो हो । हाम्रो मात्र हैन । यस्तो अरुहरुको पनि भएको छ । धन्दा मान्न हुन्न । अमेरिका आउने भिसा न पाएसम्म हल्ला नगर्नु । भिसा न पाए शत्रु हाँस्छन् । तिमीलाई त्यहाँ पनि के कमी छ र चाहिए जति पैसा छ । खर्च गर्न अब अरुको आज्ञा चाहिदैन । म नहुदा घरको मालिक तिम्री आमा र दाइ थिए । दाइ र ममी पनि यता आए पछि घरको मालिक नै तिमी छौ । पहिले अरु मालिक भएकाले तिमीलाई चिठी लेख्नुपर्दैन थियो । अब अरुको सट्टा तिमी नै मात्र एक नेपालको श्रीसम्पत्तिको मालिक भए पछि त नाकमा टिम्मुर लाएर तिम्रो नाममा चिठी लेख्नुपर्यो नत्र त कान्छाको नाममा त चिठी लेखिएको यौटै पनि न पाइने ! पाए पनि नाम मात्र आशीर्वाद प्यार भन्दिनु भन्ने मात्र । कति हेलासी हुदा रहेछन् कान्छा छोराहरु । तर ऐले तिमीले जति खर्च गरे पनि हुन्छ । चिठी तिम्रै नाममा पठाउँछौं । आम्दानी खर्च राम्ररी राख्ने र मजा पनि गरेर बस्न सक्छौ । तिम्रै नाममा पत्राचार हुनुभनेको तिम्रो थाप्लामा दायित्व आएको हो र यो ठूलो जिम्बेवारी पनि हो । नचाहिने कुरामा खर्च गर्न हुन्न । जेठाहरुलाई पनि त यस्तो व्यवहारको दायित्वबोध गरेर पिना पेलेर काम निकाल्ने गरेकै हुन्छन् । अन्यथा उनलाई पनि को मान्थ्यो र घर घाडा राम्ररी उठाएर बैङ्कमा राख्नू । दाइले भनेका मजदुरको बाँकी रकम भुक्तानी दिएका होउला । मजदुरको खान हुन्न । कन्ट्रयाक्टरहरुको पनि पाकेको पैसा दिए होउला । न दिएको भए दिनू । दाइले तिमीलाई धेरै चेकमा सही गरेर आएको छु भनेका थिए । ती चेक अरुको हात पर्न न दिनू । बैङ्कमा कति ब्यालेन्स छ कसैलाई भन्न हुन्न । अब व्यवहार सिक्नुपर्छ । अब िसंग जूरो आउन्न । आफ्नै थाप्लामा नआई कसले सिक्छ र ! कामले काम सिकाउँछ । हिम्मत गरी त्यहाँको व्यवहार चलाऊ र पढाइलाई पनि राम्रो बनाइराख । हामीलाई जस्तै तिमीलाई पनि नियास्रो लागेको कुरो त यस अगि तिमीले लेखेको चिठीबाटै बुझेको छु । तर आत्तिन हुदैन । नेपालदेखि अमेरिकासम्मको बसाइसराइको यो लामो यात्रामा कष्ठहरु त पक्कै हुन्छन् । नेपालमा प्रतीक्षा मात्र दुःख हो तिमीलाई । अमेरिका आएर नै मात्र पनि सुख त कहाँ पाइन्छ छ र ! वरु त्यही यहाँको पैसाले मोजमज्जा र आराम गर्न सकिन्छ । पैसाले मात लागेर पढाइ बिगार्ने काम भने गर्न हुदैन प्रकाश!तिम्रो पढाइको ग्रेड नै हो तिमीलाई नेपाल खाल्टोबाट उडाएर यो अमेरिकाको आकाशमा ल्याएर हामीसित मिलाउने कडी पनि । राम्रो ग्रेड ल्याएर पढे मात्र यहाँका विश्वविद्यालयले छात्रवृत्ति दिन्छन् र अमेरिकी राजदूतावासले भिसा पनि दिन्छ अनि मात्र अमेरिका छिर्ने पनि मौका पाइन्छ र हाम्रो भेट हुन्छ अन्यथा भेट पनि हुदैन भन्ने संझेर पेज र पाइनले पढ्नुपर्छ । त्यसैले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न गुच्चा खेल्ने पार्टीतिर न लागेर पढाइतिर लाग्नू । न पढेदेखि त क्रान्तिकारी पार्टीमै गए पनि हल नै चलाउने हो अमेरिका आए पनि पुलिस भएर बन्दुक नै चलाउने हो । आफूले आफैलाई न बनाए अर्काले त्यसै मन्त्री बनाइदिदैन । आफूलाई योग्य बनाउनु पहिलो काम हो तिम्रो । यसो भनेर अरु विकल्प न हेर्ने पनि हैन । प्रकि्रया मिल्यो भने त म तिमीलाई जति सक्दो चाँडो अमेरिका नै बोलाउँछु । मेरा हजुरबा बा बाह्र वर्षको छंदै बित्नुभएको थियो । हाम्रा पिताजीले जहिले पनि आमाले जेठालाई अन्याय गर्छन् भन्नुहुन्थ्यो तर माहिलाबा र कान्छाबा सँधै अंशवण्डा मिलेन हामीलाई कम भयो भनेर लड्नुहुन्थ्यो । यस्तो धेरै भाइमा भएको हुन्छ । तर म तिमी दुइभाइमा समान व्यवहार होस् भन्ने चाहन्छु । पिताको नातो न्यायसित पनि गाँसिएको छ । म कान्छा छोरा तिमीमा प्रेम न्याय र सद्भावको कामना गर्दछु ।ऐले तिमी काठमाडौंमा छौ । तिमी ताकम हुदा लेखेका थियौ - उठापठाई बिग्रको छ । व्यवहार कसरी सपार्ने भन्ने तिम्रो ज्ञान र अभिवृति र सीपबाट म पहिलेदेखि प्रभावित छु । त्यसको विस्तार होस् । म यत्ति चाहन्छु । मैले सदा प्रकाशको खोज गरेको छु । कान्छो छोरो पनि मान्छे हो र एक्लै छोडिस् भन्छ मेरो मनले । कान्छो पर्यो अन्याय भो । कान्छाले नराम्रै काम गरेका भए पनि कान्छाको दुर्गति वा ऊ एक्लो परेको त बाबुले देख्न सक्दैन नि । सबैलाई जित्ला बाबुले तर सन्तानलाई जित्न सक्दैन । त्यसमा पनि कान्छो त सानो कलिलो नाजुक हुन्छ । बाबुहरुले हारेर पनि ऊसित संझौता नगरी सुख पाउन्नन् भने तिमीले त मबाट पाउनुपर्ने माया गुमाउनु बाहेक अरु केही प्राप्त गरेका छैनौं । यसैले पनि म तड्पिन्छु तिम्रो अभावमा । तिम्रॊ एक्लोपन संझेर यो देशान्तरमा । हिम्मत गर । म बोलाउँछु । आउछौ । कान्छाले पनि पौरख गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । तिमीले पनि मान्छे बनेर देखाउनेछौ । संसारलाई समानताको कठघरामा उभ्याउन खोज्ने मैले कान्छा छोरामाथि अन्याय नहोस् यत्ति पनि सोच्न सकिनभने म न बाँचे भयो । पर्ख तिमी आउछौ । मसंग धन छैन तर पुत्रलाई प्यार अपार छ ।लुष प्रेसबाट किताबहरु घरमा ल्याएर राख्नु । सिर्जना पनि आत्मज नै हुन् । माया त सन्तानकै बराबर हुन्छ । अरु पछि ।तिम्रो बुबाहोमनाथ सुवेदीवुडबि्रज भर्जिनिया
Posted by ऐत राज तुम्रोक at 03:460comments
गजल - "शिशिर आयो झारेर पात" - अबिरल अधीकारी
शिशिर आयो, झारेर पात
मनमा रह्यो, दु:खको खात
उमेर सँगै, पाइला चाल्दा
गाह्रो भो बुझ्न, प्रेमको जात
त्यो तिम्रो साथ, म खोजी बस्दा
लगायौ किन, अरुकै बात?
कसम तोडी, गयौ नि टाढा
मायामा मेरो, मारेर लात
प्रेम नै भनी, विश्वाश गर्दा
रहेछ तिम्रो, बैशको मात
विश्वाश अति, गर्दिन अब
मलाई भयो, आज यो घात
बिर्सिन्न कैल्यै,त्यो तिम्रो चोट
औशी भो आज, पुर्णेको रात
कुरेर बस्दा, तिमी नै भनी
रित्तो भो आज, "अवि"को हात
Posted by ऐत राज तुम्रोक at 06:330comments
© 2009 लिम्बु संसार // साहित्य